ကမ္ဘာတ၀ှမ်း ကိုဗစ်ကူးစက်သူ ၁၂ သန်းကျော်ပြီ
တိုက်ရိုက်လွှင့် စက်တင်ဘာ(၁၈) စနေမနက် ဗွီအိုအေ ရေဒီယို/ရုပ်သံ
ကမ္ဘာတလွှား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အကူးစက်ခံရသူဟာ ၁၂ သန်းကျော် (၁၂,၁၂၈,၄၀၆) သွားပြီလို့ အမေရိကန် Johns Hopkins တက္ကသိုလ် စစ်တမ်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။​
ဒီအထဲမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံက အကူးစက်ခံရသူ ၃ သန်းကျော် (၃,၀၈၈,၉၁၃) နဲ့ ကမ္ဘာတလွှား အ ကူးစက်ခံရ သူစုစုပေါင်းရဲ့ လေးပုံတပုံရှိပြီး ကူးစက်မှု အများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတော့ တရက်အတွင်း အကူးစက်ခံရသူ ၆ သောင်းကျော်နဲ့ အများဆုံးစံချိန် တင်ခဲ့တာပါ။​
ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ တက်ဆက်စ်၊ တန်နစီ၊ အနောက်ဗာဂျီးနီးယားနဲ့ ယူတား ပြည်နယ် - အပါအဝင် အနဲဆုံးပြည်နယ် ၅ ခုမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကူးစက်ခံရသူ စံချိန်တင်များသွားခဲ့တာပါ။ အရီဇိုးနား၊. ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဖလော်ရီဒါနဲ့ တက်ဆက်စ် ပြည်တွေက ကျန်းမာရေး အရာရှိ တွေကလည်း သူတို့ ပြည်နယ်တွေက ဆေးရုံတွေမှာ ရှိတဲ့ အထူးကြပ်မတ်ကုသ ဆောင်တွေမှာ လူနာတွေ ပြည့်လုနီးပါ ဖြစ်နေကြပြီလို့ ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ကိုဗစ် ၁၉ ကြောင့် သေဆုံးရသူက တသိန်းသုံးသောင်းကျော် (၁၃၂, ၉၃၄) ရှိနေပြီး ဒါဟာ ကမ္ဘာတလွှား ဒီရောဂါကြောင့် သေဆုံးရသူ စုစုပေါင်း (၅၅၁,၅၂၂) ရဲ့ လေးပုံတပုံလောက် ရှိနေတာပါ။​
အခုလို ဒီကပ်ရောဂါဒဏ် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံရတဲ့ အမေရိကန်က သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ဒီကပ်ရောဂါဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုတွေကို ဝေဖန်ပြီး အဖွဲ့ကနေတရားဝင်နှုတ်ထွက်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ နောက် ၂ ရက်အကြာ ကြာသပတေးနေ့မှာပဲ WHO သူတို့ရဲ့ ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှုတွေကို ဆန်းစစ်ဖို့ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးလေ့လာချက်တွေ အရ ဒီ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေမှာ မမွေးဖွားသေးတဲ့ ကလေးငယ်ကို ကူးစက်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။
ကမ်ဘာတလှား ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ အကူးစကျခံရသူဟာ ၁၂ သနျးကြျော (၁၂,၁၂၈ ,၄၀၆) သှားပွီလို့ အမရေိကနျ Johns Hopkins တက်ကသိုလျ စဈတမျးမှာ ဖျေါပွထားပါတယျ။
ဒီအထဲမှာ အမရေိကနျနိုငျငံက အကူးစကျခံရသူ ၃ သနျးကြျော (၃,၀၈၈,၉၁၃)နဲ့ ကမ်ဘာတလှား အ ကူးစကျခံရ သူစုစုပေါငျးရဲ့ လေးပုံတပုံရှိပွီး ကူးစကျမှု အမြားဆုံးဖွဈနပေါတယျ။ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့တော့ တရကျအတှငျး အကူးစကျခံရသူ ၆ သောငျးကြျောနဲ့ အမြားဆုံးစံခြိနျ တငျခဲ့တာပါ။
ကယျလီဖိုးနီးယား၊ တကျဆကျဈ၊ တနျနစီ၊ အနောကျဗာဂြီးနီးယားနဲ့ ယူတား ပွညျနယျ - အပါအဝငျ အနဲဆုံးပွညျနယျ ၅ ခုမှာ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ ကူးစကျခံရသူ စံခြိနျတငျမြားသှားခဲ့တာပါ။အရီဇိုးနား၊. ကယျလီဖိုးနီးယား၊ ဖလျောရီဒါနဲ့ တကျဆကျဈ ပွညျတှကေ ကနျြးမာရေး အရာရှိ တှကေလညျး သူတို့ ပွညျနယျတှကေ ဆေးရုံတှမှော ရှိတဲ့ အထူးကွပျမတျကုသ ဆောငျတှမှော လူနာတှေ ပွညျ့လုနီးပါ ဖွဈနကွေပွီလို့ ပွောပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံမှာ ကိုဗဈ ၁၉ကွောငျ့ သဆေုံးရသူက တသိနျးသုံးသောငျးကြျော (၁၃၂, ၉၃၄) ရှိနပွေီး ဒါဟာ ကမ်ဘာတလှား ဒီရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးရသူ စုစုပေါငျး (၅၅၁,၅၂၂) ရဲ့ လေးပုံတပုံလောကျ ရှိနတောပါ။
အခုလို ဒီကပျရောဂါဒဏျ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံရတဲ့ အမရေိကနျက သမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့က WHOကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကွီးရဲ့ ဒီကပျရောဂါဆိုငျရာတုနျ့ပွနျမှုတှကေို ဝဖေနျပွီး အဖှဲ့ကနတေရားဝငျနှုတျထှကျဖို့ လုပျဆောငျခဲ့တဲ့ နောကျ ၂ ရကျအကွာ ကွာသပတေးနမှေ့ာပဲ WHO သူတို့ရဲ့ ကပျရောဂါဆိုငျရာ တုနျ့ပွနျမှုတှကေို ဆနျးစဈဖို့ လှတျလပျတဲ့ စုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့ ဖှဲ့ခဲ့ပါတယျ။
နောကျဆုံးလလေ့ာခကျြတှေ အရ ဒီ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုး ဟာ ကိုယျဝနျဆောငျ မိခငျတှမှောမမှေးဖှားသေးတဲ့ ကလေးငယျကို ကူးစကျနိုငျကွောငျး တှရှေိ့ခဲ့တာပါ။
ကန် မှာ ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၃၀,၀၀၀ ကျော်ပြီ
ကမ္ဘာတ၀န်း ကိုဗစ်ကူးစက်သူ ၁၁ သန်းကျော်လာ
COVID ကာလ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အတွက် သဘာဝ အခြေခံ ခရီးသွားနေရာသစ်တွေ ပြင်ဆင်
အမေရိကန်ပြည်နယ်တချို့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုမြင့်တက်